Ini handina basa nemakuki, uye ndinokanganwa nezve yavo inosemesa mameseji | Linux Vakapindwa muropa
Ini handina basa nezve makuki, kuwedzerwa kunokutendera kuti ukanganwe nezve dzakawanda mameseji anotsamwisa nezve makuki
Ini handina basa nemakuki
Mamwe makore apfuura, iyo EC yaida kudzidzisa vashandisi nezvematambudziko ekutsvaira mambure. Ndiri kutaura nezve izvo zvavakaita nemakuki, kana zvakanyanyisa nezve chisungo chemawebhusaiti kutizivisa kuti vari kuzoshandisa, chiziviso chatinofanira kubvuma kuti tifambe kuenda kumberi. Kusvikira isu tavabvuma, yambiro hainyangarika uye, kana tangoziva, ndinofunga isu tinogona kutaura kuti mushonga wanga wakaipisisa kupfuura chirwere. Kana, seni, meseji idzi dzichikunetsa, ndinokurudzira kushandisa Ini handina basa nemakuki.
Asi chii ichi? Eya, chishandiso chavasina kugadzira pachazvo kana zvasvika pakupa zita, sezvo iri "Ini handina basa nemakuki" muChirungu. Inowanikwa mu nzira yekuwedzera kune mazhinji mabhurawuza anozivikanwa, kusanganisira Firefox, Chrome (iyo inoita kuti zvikwanise kuiisa mune chero bhurawuza), Edge neOpera, pamwe nerondedzero yekuwedzera kune ekushambadzira blockers senge Adblock Plus, Adblock kana uBlock Origin .
1 Ini handina basa nezve makuki anotambira makuki iwe
2 Inowanikwa kune chero chero browser
Ini handina basa nezve makuki anotambira makuki iwe
Izvo zvandisina hanya nezve makuki zvinoita zviri nyore tipe "bvuma" makuki kwatiri. Zvimwe chete purojekiti webhusaiti Vanotiudza zvinhu zvakati wandei: chekutanga ndechekuti, kunyangwe tikasazvigamuchira, vanogona kuzvishandisa nenzira imwecheteyo; chechipiri ndechekuti chinhu chakanyanyokosha kushandisa mabhurawuza senge Firefox neiyo ETP (Enhanced Tracking Dziviriro), ayo ari masisitimu ekudzivirira mapeji ewebhu kubva mukugadzira chimiro kubva mukushandisa kwedu, muchidimbu nekusabvumidza vateveri kuti vaite.
Kamwe kana ini ndisina basa nezve makuki akaiswa, tinogona kukanganwa nezvavo. Kana tikatarisa rondedzero, Yakareba, uye inosanganisira gumi, mazana kana pamwe zviuru zvemitemo kuitira kuti makuki mazhinji atichawana pane netiweki agamuchirwa. Kana iri iyi runyorwa, ichokwadi kuti inogona kuwedzerwa kune yedu yenguva dzose yezvinhu blocker, asi zvakare kuti haina kugadzirisa sezvinoitwa nekuwedzera.
Senge sekunge yaivharira, ini handina basa nemakuki anotiudzawo kana yapinda mukutamba: icharatidza girini "V" pane yega yega peji rewebhu pawakatogamuchira makuki, iyo inotibvumidzawo isu kuziva kuti maive musina wekugamuchira. Uye kana isu tisingade kuti iite, tinogona kugadzira mitemo nekudzvanya kurudyi pane yekuwedzera icon uye nekuisa marongero ayo.
Inowanikwa kune chero chero browser
Parizvino, tinogona kutaura kuti pane matatu chete injini: imwe Firefox, imwe iri Chromium uye imwe iri Apple's Safari. YeFirefox, Chromium uye ese mabhurawuza anoenderana neGoogle injini, pane kuwedzera, kunyangwe muzvitoro zvepamutemo zvakaita seEdge kana Opera. Panyaya yeSafari, zvinhu zvakati omei: isu tichafanirwa kuwedzera runyorwa nemaoko kana kushandisa sarudzo senge AdGuard, nekuti inosanganisira "iyo yekuwedzera", kana kuti zvirinani, runyorwa rwayo, rwatinogona kumisikidza kubva kuAdGuard sarudzo.
Kune avo vanoda kushandisa zvinowedzera, mu Iyi link une Firefox, uye in uyu mumwe une iyo Chrome imwe. Kana iwe uchinge watoshandisa AdGuard, unogona kumisikidza ini handina basa nemakuki nekudzvanya kurudyi pane yayo yekuwedzera icon, kupinda "Zvinosemesa zvinhu" uye kumisikidza iyo switch. Kutaura chokwadi, ini handina kuyedza iyi yekupedzisira sarudzo asi, kubva pakuonekwa kwayo, AdGuard gadziridza runyorwa kubva kune chaicho sosi nguva nenguva, kana kuti ndiwo mafungiro ekuti isu tinowana tichiona kuti yakagadziridzwa muna Chikunguru 29 uye kuti pane chairo chinongedzo chinotitora isu kuenda kune yepamutemo webhusaiti yeiyo purojekiti.
Saka ikozvino iwe unoziva: kana iwe usiri kuda kuti uswere uchipedza zuva rekuvhara windows kune izvi zviziviso, ini handina basa nezve makuki akagadzirwa uine iwe mupfungwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Ini handina basa nezve makuki, kuwedzerwa kunokutendera kuti ukanganwe nezve dzakawanda mameseji anotsamwisa nezve makuki
Iyo Inosimudzirwa Yekutevera Yekudzivirira yeFirefox yakanaka kwazvo dai zvisiri nekuti mapeji mazhinji anomira kushanda uye unofanirwa kuimisa, pakupedzisira isu takafanana.
Kune rimwe divi, ini handina basa nekuki kwave kuri kuwedzera kusingaenderane neshanduro nyowani dzeFirefox yemidziyo nhare kwenguva yakareba.
Iwo macokie zviziviso ndeimwe yemhedzisiro inoshungurudza yemitemo yekudzivirira data yeEU. Ichi chiwedzero chakakosha kudzivirira ichi mhedzisiro, kunyanya kana iwe wagadzira iyo browser kuti ibvise data uye yekutsvagisa nhoroondo kana uchibuda. Ndanga ndichiishandisa kwenguva yakareba uye zvinotaridzika zvakanaka, zvishoma kuti ndiwedzere.
Kutonhora. Inonyanya kubatsira, ndatenda
Ndichashandisa zvese zviri zviviri.
Fedora 33 beta yakatoburitswa, ziva shanduko uye nhau